बसभित्र मौन बसौं:: Naya Nepal
काठमाडौं, ६ कार्तिक । सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरी दसैं मनाउन बस चढेर घर जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यी उपाय अपनाउन नबिर्सिनु होला । बसभित्र फेससिल्ड र मास्क लगाऔं । मौन बसौं। झ्याल खुलै राखौं ।शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुन बसभित्र भौतिक दूरी पालनाको सम्भावना न्यून हुने बताउँछन् । ‘बसभित्र सिटको दूरी निकै कम हुन्छ । त्यसैले मास्क लगाउनु पर्छ । मौन रहनु पर्छ’, डा. पुन भन्छन्, ‘झ्याल खुला राख्दा संक्रमणको जोखिम न्यून हुन्छ ।’ नाक र मुखबाट निस्किने छिटा हावामै पनि तैरिन सक्ने भएकाले बसको झ्यालढोका खुलै राख्दा संक्रमणको जोखिम कम हुने डा. पुन बताउँछन् ।बसभित्र कोचाकोच अवस्थामा बोल्दा थुकका छिटा फैलिन्छन् । झ्याल बन्द राख्दा ती कण बसभित्रै तैरिएर धेरैलाई संक्रमणको जोखिम हुन सक्छ । कोही संक्रमित छ भने उसले दिएको नोटबाटै संक्रमण हुने जोखिम हुन्छ ।संक्रमितसँग १५ मिनेट नजिक रहनु पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका लागि पर्याप्त हुने विज्ञ बताउँछन् । संक्रमितले बसभित्र बोल्दा, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने ससाना छिटाले संक्रमण हुन सक्छ । लामो एवं मध्यम दूरीको यात्रामा एयर कन्डिसनर (एसी) नचलाउन विज्ञको सुझाव छ ।यातायात व्यवस्था विभागले संक्रमणको सम्भावना हुने आकलन गर्दै फेससिल्ड अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । फेससिल्ड र मास्क लगाउँदा जोखिम कम हुने विज्ञको भनाइ छ ।‘बसहरू स्यानिटाइज गरेका पनि हुँदैनन् । कोचाकोच यात्रा गराउँछन् । अब यात्रु आफै सचेत हुनु जरुरी छ’, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘मास्क र फेससिल्ड लगाउनुपर्छ। साबुनपानीको व्यवस्था नहुने अवस्थामा स्यानिटाइजरको उपयोग गर्नुपर्छ ।’यात्रा गरेपछि पनि घरभित्र सोझै नपसी लगाएको कपडा बाहिरै राख्न र साबुनपानीले नुहाउन डा. पुन सुझाउँछन् । ‘नजिकै संक्रमित व्यक्ति बसेको छ भने उसको नाक र मुखबाट निस्केका छिटाहरू लुगा वा सिटमा पनि अड्केको हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको सन्देश पालना गर्दै भरसक अहिले बसैकै ठाउँमा दसैं मनाउँदा राम्रो हुन्छ । यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थामा होसियारी अपनाउनै पर्छ ।’दसैं लागेसँगै जोखिमपूर्ण ढंगले लामो यात्रा गर्नेको लर्को छ । त्यही लर्कोमा संक्रमित पनि हुन सक्छन् । कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गरेको संघीय राजधानीबाटै दसैं मनाउन विभिन्न जिल्ला गइरहेका छन् ।मन्त्रिपरिषद्को असोज २६ गतेको बैठकले पुरानै भाडा दरमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउने निर्णय गरेपछि संक्रमणको जोखिम झनै बढेको हो । खर्च नउठ्ने जनाउँदै व्यवसायीले सिट भरेरै यात्रु बोक्न थालेका छन् । त्यसअघि भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आधा सिट क्षमताका सवारी चलाउनुपर्ने र ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।प्रवक्ता डा. गौतमले लामो यात्रा गरेको व्यक्तिलाई गाउँघरमा देखे सात दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बताए । ‘कोरोना सार्ने सम्भावना भएकोले केहि दिन क्वारेन्टाइनमा राख्न भनिएको हो’, उनले भने ।
काठमाडौं, ६ कात्तिक । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मंगलवार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नेताहरुको कार्यविभाजन गरेको छ ।बैठकले डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ११ सय सदस्यीय संघीय परिषद् र ८०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेकव छ । बैठकमा सहभागी एक कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार जसपाले आफ्ना नेताहरुको कार्यविभाजन गरेको छ ।
केन्द्रीय सल्लाहकार समिति प्रमुख- भीमप्रसाद गौतम
केन्द्रीय विज्ञ परिषद् प्रमुख- डा. पुष्पराज राजकर्णिकार
केन्द्रीय अनुशासन आयोग प्रमुख- लक्ष्मणलाल कर्ण
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख- अनिलकुमार झा
केन्द्रीय लेखापरीक्षण प्रमुख- अमरेश नारायण झा
नीति, योजना तथा कार्य व्यवस्था विभाग प्रमुख- शरतसिंह भण्डारी
अनुशासन, अभिलेख तथा अन्तरप्रदेश समन्वय विभाग प्रमुख- रामसहायप्रसाद यादव
पार्टी स्कुल तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख- हेमराज राई
अन्तर्राष्ट्रिय (राजनीतिक तथा कुटनीतिक) विभाग प्रमुख- रकम चेम्जोङ
सूचना, सञ्चार प्रकाशन तथा प्रचार विभाग प्रमुख- डम्बरु बल्लभ खतिवडा
आर्थिक विभाग प्रमुख- उमाकान्त झा
संसदीय व्यवस्था विभाग प्रमुख- अमृता अग्रहरि
संघीय मामिला विभाग प्रमुख- वृषेशचन्द्र लाल
शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते एवम् द्वन्द्व प्रभावित व्यवस्थापन विभाग प्रमुख- चन्दा चौधरी
सुरक्षा विभाग प्रमुख- सुनील रोहित
उत्पादन तथा स्वरोजगार विभाग प्रमुख- रमेश यादव
कृषि तथा भूमि व्यवस्था विभाग प्रमुख- मृगेन्द्रसिंह यादव
वन तथा वातावरण विभाग प्रमुख- गोविन्द चौधरी
सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख- निर्जला राउत
मानव अधिकार तथा सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख- सुशीला श्रेष्ठ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन विभाग प्रमुख- मनिषकुमार सुमन
आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग प्रमुख- अकवाल अहमद शाह
शहरी विकास तथा खानेपानी विभाग प्रमुख- इस्तियाक राईन
प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन प्रमुख- अकवाल अहमद शाह
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुख- रेणुकुमारी यादव
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख- युवराज कार्की
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग प्रमुख- प्रकाश अधिकारी
राज्य व्यवस्था विभाग प्रमुख- राजकिशोर यादव
स्थानीय तह परिचालन विभाग प्रमुख- महेन्द्र राय यादव
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था प्रमुख- सवेन्द्रनाथ शुक्ल
श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुख- राजकुमार लेखी
संवैधानिक व्यवस्था तथा कानून विभाग प्रमुख- नवराज सुवेदी
समावेशी विभाग प्रमुख- हिसिला यमी
आर्थिक नीति तथा योजना विभाग प्रमुख- प्रशान्त सिंह
जल तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विभाग प्रमुख- रणध्वज कन्दङ्वा
एक युवक टाउको निहुराएर समयमै आफ्नो काममा पुग्न हतार–हतार हिँडिरहेका थिए । जाँदै गर्दा बाटोमा उनले एकजना मजदुरले रङ पोतिरहेको देखेर टक्क रोकिए ।मजदुरले रङ पोत्ने क्रममा समय र सामान दुवै फारो गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसरी काम गर्दा एकातिर बढी समय लाग्थ्यो भने अर्कातिर सामान पनि बढी लागिरहेको थियो । त्यो सबै हेरिरहेका युवक मजदुरनजिकै गए र नम्र स्वरमा भने, ‘साथी, अहिले तपाईंले लगाइरहेको भन्दा थोरै समय र कम सामानले योभन्दा राम्रो काम हुन सक्छ । तपाईं त्यो सीप सिक्न चाहनुहुन्छ ?’युवकको प्रश्न सुनेर मजदुर छक्क परे । उनले जवाफ दिन सकेनन् । उनको छेवैमा उनका मालिक पनि उभिइरहेका थिए । युवकको प्रस्ताव सुनेपछि तिनले भने, ‘भाइ, तिमीसित यस्तो कुनै सीप छ भने हामीलाई पनि सिकाऊ न त ।’मालिकको अनुरोध सुनेपछि ती युवकले मजदुरले लगाउने एप्रोन लगाएर रङ पोत्ने सामान लिएर काममा जुटे । साँझ हुनुअगावै उनले आफ्नो कुरा सिद्ध गरेर देखाइदिए । त्यहाँबाट बिदा भएर जाने वेलामा मालिकले ती युवकलाई उनको पारिश्रमिक र विशेष इनामसमेत दिए । तर, उनले त्यो पैसा मजदुरलाई दिए र भने, ‘काम त उहाँकै हो, मैले त यसमा सहयोग मात्र गरेको हुँ ।मैले यो पैसा लिएँ भने उहाँको पारिश्रमिक खोसिनेछ, जुन पटक्कै राम्रो होइन ।’ यसरी कम समयमा कम सामान प्रयोग गरेर काम गरेर देखाइदिने ती युवकको नाम थियो– कार्ल मार्क्स । जसले पछि साम्यवादको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरी संसारमा नयाँ विचारधाराको बिउ रोपे ।